Agate greepu bụ aha ahia, ndị a bụ n'ezie botryoidal chalcedony - vidiyo
Agate greepu bụ aha ahia, ndị a bụ n'ezie botryoidal chalcedony. Botryoidal pụtara klọọkụ gbara okirikiri gbara agba nke ejikọtara ọnụ.
Mkpụrụ ụdị botryoidal ma ọ bụ omume ịnweta bụ ebe nke ịnweta nwere ụdị mpụga zuru ụwarị dị ka ụyọkọ mkpụrụ vaịn. Nke a bụ ụdị a na-ahụkarị maka ọtụtụ mineral, ọkachasị hematite, ụdị a na-ahụkarị. Ọ bụkwa ụdị a na-ahụkarị nke goethite, smithsonite, fluorite na malachite. Nke a gụnyere chrysocolla.
Mpaghara ọ bụla ma ọ bụ mkpụrụ vaịn n'ime mineral botryoidal dị obere karịa nke mineral renip, na nke dị obere karịa nke mineral mineral. Botryoidal mineral na-etolite mgbe ọtụtụ nuclei dị nso, sọks, ájá, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị nso. Kristal ma ọ bụ fibrous kristal na-eto radially gburugburu nuclei n'otu ọnụego, na-egosi dị ka ebe. N'ikpeazụ, akụkụ ndị a na-abịa ma ọ bụ jikọtara ndị ọzọ dị nso. Mgbe ahụ, a na-agbakọta ngalaba ndị a dị nso iji mejupụta ụyọkọ botryoidal.
Agate greepu - Botryoidal chalcedony quartz
Chalcedony bụ ụdị silica cryptocrystalline nke mejupụtara intergrowths nke ọma nke quartz na moganite. Ihe ndị a bụ mineral silica, mana ha dị iche na nke ahụ quartz nwere usoro klọọkụ akpọrọ, ebe moganite bụ monoclinic. Ọkpụkpọ kemịkalụ nke Chalcedony bụ SiO₂.
Chalcedony nwere ihe na-agba waxy, ọ pụkwara ịbụ onye na-asụgharị ma ọ bụ translucent. O nwere ike iche ụdị agba dị iche iche, mana ndị a na-ahụkarị na-acha ọcha, na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha aja aja site na ihe nchara ka ọ dị oji. Ụdị chalcedony na-ere ahịa na-emekarị ka ọ dị mma ma ọ bụ kpoo ọkụ.
Mkpụrụ vaịn agate pụtara
Agate nke greepu na-akwalite nkwụsi ike n'ime obi, mkparịta ụka, na ntozu okè. Ngwongwo ya ndi na-ekpo oku, nke na-echebe ihe na-akwado nchebe na ntụkwasị obi nke onwe. Ọ na-enye ohere maka ntụgharị uche miri emi ma sie ike n'ime obere oge. Agate greepu bụ kristal nke nrọ, kọọrọnụ na okomoko.
Mkpụrụ osisi vaịn sitere na Indonesia
zụta agate eke ekeresimesi na ụlọ ahịa anyị